Gumiguru 2017 - Network maRadio
musha / 2017 / Gumiguru
Mwedzi: October 2017
Meet the RT4 - Iyo nyika ye-iyo-hunyanzvi mu Network-maRadio.
Verenga zvakazara zvirevo
Radio-Tone RT4 Vhidhiyo Ongororo
Tarisa iyi vhidhiyo ongororo yeiyo Network Android Radio RT4.
Une zvirevo zveantena here?
Nekudaro, iwe uri anofarira radio radio. Iwe wakangotamira mukati meimba nyowani ndokusvika pamhedziso yekuti vavakidzani vako havazokubvumidze iwe kuisa antenna padenga.
Zvakanaka, zvakanaka. Iwe uchiri kunakidzwa nemusha mutsva, saka unofunga kungonamatira kune yako yekare FM ruoko. Unoenda padhuze nepahwindo wotanga kuyedza kurova vese vanodzokorora vari munzvimbo iyi. Haurove kana imwe chete. Wakatopererwa, iwe unonamira ruoko rwako kunze kwehwindo, gadza iyo HT kune izere simba, uye zvakadaro, hapana. Iwe haugone kunzwa kutapurirana.
Usarega. Hausi wega. Izvi zvakaitika kune dzimwe hams dzakawanda pasirese. Kana iwe uchinyatsoda hamradio yeiyo pfungwa yekuve neQSO's nemamwe mahams uye mokurukura nezve tekinoroji, unogona kushandisa IRN - Iyo International Radio Network.
Iyi sisitimu yakabatana kune akati wandei hamradio RF chiteshi pasirese uye iwe unogona kugara uchikurukura nenharaunda. Zvese zvaunoda kubatana kweWiFi, kana chirongwa chedata re 3G / 4G uye wakabatanidzwa. Ziva kuti iwe unoda rezinesi hamradio rezenisi kana iwe uchida kuendesa pane IRN.
Zvinonakidza. Ichiri hamradio! .
Hamradio ndizvo zvaunoda kuti zvive!
Kuhwina yemahara Inrico T298s 3G / Wifi + UHF Radio (400-470 MHz)
Uyu ndiwo mukana wako mukuru wekuhwina yemahara UHF network transceiver - mutengesi wakanyanya Inrico T298s 3G / Wifi + UHF Radio (400-470 MHz)
Haufanire kutenga chero chinhu. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kunyoresa mune yedu tsamba yekunyora neako callign uye iwe unowana yemahara kupinda kune sweepstake iyo ichaitika pane 31/12/2017.
Tichaonana neanokunda ne-e-mail saka ita shuwa kuti iwe unowedzera kero yedu ye-e-mail kune vako vokukurukura kuitira kuti irege kuzoguma mune spam folda. Yedu e-mail kero ndeye hamradio@megahertz.shop
Ukangonyoresa unowana kodhi yako yakasarudzika uye iwe unongoda kugovana neshamwari dzako. Tarisa maitiro aungawedzera mikana yako:
Mumwe nemumwe akataura muenzi +1 kupinda
Goverana paLinkedIn +1 kupinda
Goverana paPinterest + 1 kupinda
Wedzera GPS yekutevera kune yako Network Radio uchishandisa RadioTone RT4
Iyo Radio-Tone RT4 inouya neyakaisirwa software mhinduro iyo inobvumidza kutarisa kune variko vevanoshanda navo, shamwari kana imwe Hams.
Chero iwe unoshandisa iyo kushanda nemaapplication akaita seZello, kana eayo hamradio hobby ne IRN, iyo RadioTone ndiyo yepamusoro netiweki yakabata ruoko redhiyo. Iyo inoratidzira kesi yakasimba ine kutaridzika kweiyo Motorola yemazuva ano. Bhatiri rayo rinogara nariini uye mutauri anounza inoshamisa ruzha uye sekristaro yakajeka kurira.
Iyo RT4 PTT Smartphone chigadzirwa chisina rezinesi uye hachina miganho yedaro kusiyana nemaredhiyo echinyakare. Iyo yakakodzera 3G, 4G uye Wifi Network, ine Yakakwira-chaiyo GPS Kanyanga ine Online Positioning Software Inosanganisirwa. Pakarepo nzvimbo inogona kuteverwa nemapuratifomu akasiyana (PC uye mafoni). Varidzi vanogona kuteedzera Nzvimbo Nhoroondo uye Kumhanya kwechero mafoni; pachave nealam uye zviziviso zveyese foni kana iri kunze kweiyo geofence, yakaiswa nemuridzi weneti.
Kutenga ruzivo kunogona kuwanikwa pano
Isu tese tinoda kutaura nehamradio comunity, handiti? Ko kana iwe uchikwanisa kuramba uchitaurirana nedzimwe hams, kana uchifamba neyako ruoko uye usina mukana wekudzokorora wemuno?
Fungidzira nyika yepamuchinjikwa, refu kukwira chitima izere nezvakanaka uye zvinozorodza QSO's.
Rimwe zuva, RedBull Air Race yakauya kuOporto, Portugal. Sezvo ini ndichigara muLisbon, ndakafunga kutora mazana matatu emakiromita kuchovha nechitima kuti ndione mujaho. Ndakatora yangu ruoko rwakabata nhepfenyuro neni. Inotaridzika senge yakajairika handheld transceiver. Asi hazvisi. Inharembozha ine bhatani rePTT. Iine TeamSpeak 3 yakaiswa uye yakaiswa mukati me IRN - International Radio Network, Ini ndaive ndakabatana neyangu yandaifarira hamradio Kutaura Boka: Iyo Guild QSO chiteshi. Ndinokuudza… Kufamba kwakanaka zvakadii. Zvakanaka, ndinofanira kubvuma, ndinoda yakanaka yekuyambuka-nyika chitima kukwira. Ini ndakangogara kumashure, ndakasununguka uye ndakanakidzwa nemaonero nepahwindo rangu, ndichitaura nehama dzangu shamwari. Neraki, chitima ichi chakapa yemahara yeWi-Fi kubatana, asi ini ndaigona zvakare kushandisa yangu 3G dataplan.
Ini ndoziva izvi zviri kure nemusangano Convention hamradio, asi zvinhu zviri kuitika. Kana kwauri iyi isiri hamradio, nekuti urikushandisa netiweki yekutengesa yezwi kutakura, ndinokuremekedza, asi… Maitiro andinozviona? Hamradio OM, pane yekuzorora chitima kukwira, iine redhiyo-senge ruoko rwakabata, kutaura kune dzimwe hams, kune rimwe divi regungwa. Kwandiri, izvi hazvisi chinhu asi "hamradioing".
Nakidzwa nekukwira kwako!
Pane yakasarudzika nzira yekumisikidza iyo 4G LTE sevhisi pane yako RFinder neAT & T Wireless:
Tumira e-mail kuna jr5788@att.com ne W2CYK@rfinder.net muCC.
SUBJECT: M1 KUTendeuka KUNE LTE
«JOSH, FUNGA KUTENDA M1 YANGU KUTI LTE.
YANGU IMEI IS:
YANGU Nhare YENYAYA NDI:
YANGU AT & T PIN IS:
ZITA RAKO NEYENYU YAKO YOKUTAURA
Ipapo, iwe unongofanirwa kumirira kusvika kumazuva mashoma kusvikira iko iko activation iko kwaitika. Nakidzwa neRFinder yako LTE kugona.
Maitiro akadaro haana basa mune dzimwe nyika.
PaKanal Zello Funk tiri nharaunda huru yeredhiyo.
Pano, hobby redhiyo vanoshanda, vaimbove uye vanoshanda radio maamateurs, mamaneja, madzimai epamba, vatyairi vematekisi uye vatyairi vemarori, chengetedzo uye vadzidzi vanosangana. Wese munhu anogona kujoina uye kugamuchirwa pamugwagwa.
Iyo yemahara app zello inoshanda pane chero PC, Android, BlackBerry kana IOS.
Zello anoshandura nharembozha iyi kuita walkie-talkie. Ndokunge, iwo manzwi ezwi anoburitswazve zvakananga mune chaiyo-nguva kune vanofona navo. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kudzvanya iyo Push-to-kutaura bhatani uye iwe unozonzwikwa neshamwari.
KuZellofunk, tinotaura nezvezvinhu zvezuva nezuva uye tinotandara pamwe chete. Tiri kuseka, kuseka uye kunakidzwa nemukana wekuwana zello redhiyo shamwari dzepasirese. Isu tinotaurawo nezvenyaya dzakakomba uye pamusoro pezvose tinobatsirana kana zvichidikanwa.
naNico kubva zello.info
Chokwadi F25 - 4G Wifi Zello Transceiver
Zello radio mumota
Kugonesa kushandiswa kwesero panguva yekutyaira uye kuita kuti ive yakachengeteka, bhatani reBluetooth PTT rinogona kushandiswa kana uchishandisa nhare mbozha.
Mumuenzaniso wakaratidzwa, Samsung Galaxy S7 yakashandiswa ne "Auto Bluetooth Media Bhatani" kubva kuXCSource.
Zvese zvishandiso zvinogona kubatanidzwa nyore nyore uye kushanda zvisina mushe.
Iyo yekutamba / yekumbomira kiyi yakatsanangurwa seyokutumira kiyi uye inoshanda (zvinoenderana nesetingi) mu PTT pamwe nekutendeuka mamiriro.
Zvakare, mabhatani evhoriyamu ari kushanda uye anotendera kugadziriswa kweiyo vhoriyamu mbozhanhare.
Izvo zvinosanganisirwa zvishongedzo zvinobvumira kunamatira kwakananga (ne clip) kune mudhiraivho. Ruoko harufanire kusiya vhiri uchimanikidza PTT bhatani.
Neimwe nzira, iyo Mediabutton inogona zvakare kunamirwa panzvimbo yakakodzera (uchishandisa tepi yekunamatira yakapihwa).
Mushure mekuyedzwa kwekutanga, kusanganiswa kwenharembozha neMediabutton uye kusangana mukati memotokari midhiya yepakati (kuwedzera vhoriyamu rekugamuchira) ndiyo mhinduro inobatsira yeserura mashandiro!
Munyori: Nicu anobva http://zello.info